लगानी: लगानीको गुणक। निवेश को गुणक असर
खपत समाजलाई कुल लागत सबैभन्दा महत्वपूर्ण घटक हो। यो अवधारणा अन्तर्गत सामान र अन्तिम खपत सेवाहरू खरिद गर्न प्रयोग गर्ने जनसंख्या को लागत बुझ्छु। उपभोक्ता को स्तर धेरै कारक प्रभावित खर्च। ती मध्ये एक लगानीको छ। लगानी गुणक तिनीहरूलाई संग सकल उत्पादन मा परिवर्तन देखाउँदछ एक गुणक छ।
पहिलो गुणक सूत्र
कीन्स को व्याख्या गाँसिएको उपभोग गर्न हाशिये propensity गुणक सिद्धान्त संग। आफ्नो विचार मा 1931 प्रोफेसर रोबर्ट Kahn द्वारा सिर्जना गरिएको थियो। उहाँले लागत (जस्तै लोक) एक "प्राथमिक" रोजगार सिर्जना गर्न थालेका छन् कि, साथै कारण विश्वास को क्रय शक्ति कामदारहरूको र यो गतिविधि को कार्यान्वयन संलग्न छन् कि कम्पनीहरु। तिनीहरूले "माध्यमिक" रोजगारीको स्रोत बन्ने, नयाँ मांग गठन।
यस मामला मा, नयाँ लागत कार्यकर्ता र कम्पनीहरु को आय अंश मात्र कब्जा हुनेछ, र बाँकी रकम ऋण को भुक्तानीको लागि संलग्न वा छुट्याइएको गरिनेछ। Kahn अनुसार, गुणक प्रत्येक नयाँ चरण मा खर्च भएको रकम को आकार मा निर्भर गर्दछ। (- K 1) K = 1 /: यसरी, सूत्र लगानीको गुणक सेट, थियो। यो विचार कीन्स विकास भएको थियो। (सी = .डी वाई / डि) - यसको गुणक को आकर्षित निवेश को राष्ट्रिय आय को निर्भरता देखाउँछ। यसलाई जो उपभोग गर्न वृद्धि propensity निर्भर राशि मा भएको थियो। लगानी, उपभोग सी, र - - हामी Y- राष्ट्रिय आय, म को भनेर विचार यदि propensity उपभोग गर्न, त्यसपछि सूत्र छ: .डी वाई = डीसी + डि; .डी वाई = बन्चरो .डी वाई + डि; डीसी = .डी वाई xa; .डी वाई = डि (1 - क); .डी वाई / डि = 1 / (1 - क) = K> 1 यदि0<1; द्वारा - लगानी गुणक।
निवेश को गुणक असर
परिवर्तन निवेश कारण छन् भने वृद्धि र आय को कमी थप महत्वपूर्ण हुनेछ। यो परिणाम संग संख्यात्मक उदाहरण विचार सामना गर्न सकिन्छ। खपत को एक समारोह निम्न सूत्र मा प्रस्तुत छ रूपमा सुरुमा मान लगानी (I0) 100 (BN ..),: सी = 20 एक्स 0.6 + Us | निम्नानुसार साधारण राज्य समीकरण छ: Y0 = 20 एक्स0+ 0,6Y + छ त्यो Y0 = 300 100 (bln। दल्नु।)।
प्रारम्भिक जम्मा 140 को राशि बढ्न भने (I1), निम्न समीकरण Y1 हुन = 0.6 एक्स 20 + Y1 + 140. त्यसैले Y1 = 400 (BN। RUB।) हुनेछ। यसलाई निष्कर्षमा सकिन्छ कि आफ्नो विकास गर्न अर्ब 40। Rubles। 100 अर्ब को आय मा वृद्धि गर्न नेतृत्व गरेको छ। RUB। यो लगानीको गुणक असर भनिन्छ यो घटना हो।
निवेश: लगानीको गुणक
कुल व्यय को घटक को एक लगानीको छन्। तिनीहरूलाई मुनि अक्सर कम्पनी को असली राजधानी को मूल्यांकन गर्न योगदान महसुस। अक्सर, यी दीर्घकालीन लगानी हो। तिनीहरूलाई नेट लागत को हदसम्म दुई मुख्य कारक मा निर्भर गर्दछ। पहिलो - शुद्ध लाभ, मालिकको खर्च प्राप्त हुनुपर्छ जो अपेक्षित दर। दोस्रो कारक चासो को दर छ।
उत्पादन व्यवसायी लगानी सामान लगानी मा प्रारम्भिक वृद्धि को मामला मा थप आय प्राप्त हुनेछ। को गुणक निर्धारण गर्न संकेतक को अध्ययन मा सजिलो हुनेछ।
शुद्ध लाभ अपेक्षित दर
लाभ लगानी खर्च को आज्ञा लागि मनसाय छ। तिनीहरूले लाभदायक हुनेछ अपेक्षा गरिएको छ भने त्यो छ, उद्यमी मात्र खरिद हुनेछ। यो एक विशिष्ट उदाहरण विचार गर्न सम्भव छ। फर्नीचर को निर्माण को लागि कार्यशाला मालिक नयाँ मा लगानी गर्न चाहन्छ Grinder। 1 वर्ष - यो 2000 rubles, र अवधि लागत। एक कार्यशाला को निर्माण राजस्व वृद्धि गर्न, र यसैले गर्न। यो छ, लगानीको गुणक 2.5 छ, नेट अपेक्षा फिर्ती 2500 छ भनेर ग्रहण गर्न सकिन्छ।
लगानीको अर्को घटक लागत लिङ्क। यो भनेर एक पीस मिसिन को खरिदका लागि आवश्यक उद्यमी ऋण रकम भुक्तानी मूल्य छ ब्याज दर छ। चासो को दर शुद्ध लाभ को अपेक्षित दर भन्दा कम छ भने लगानी लाभदायक हुन्छ। यो एक महत्वपूर्ण भूमिका नाममात्र र वास्तविक ब्याज दर द्वारा प्ले छ उल्लेख गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय आय परिवर्तन
लगानी वृद्धि, लगानी गुणक प्रति एकाइ राष्ट्रिय आय मा परिवर्तन हुनेछ। कीन्स सक्रिय घटक अमेरिकी र बेलायत अर्थव्यवस्था 2.5 छ भनेर हिसाब थियो। यसलाई आफ्नो प्राविधिक नवीनता, यसलाई संग सम्बन्धित छ जो निकास छ रूपमा कार्य डिस्पोजेबल निवेश यस्तो समय सम्म जारी हुनेछ। यस कारण, दीर्घकालीन लगानी थप लाभदायक। जब0<1, को गुणक 1, जो आफ्नो वृद्धि को एक राज्य को आय वृद्धि हुनेछ भन्ने हो भन्दा बढि हुनेछ।
परिवर्तनहरू लाभ मा बचत, अर्थात् निवेश द्वारा कारण गरिनेछ। कीन्स लगानीको आवश्यक स्तर हासिल गर्न बचत कसरी बनाउन देखाए। यो प्रक्रिया multipliers द्वारा गरिन्छ। बैज्ञानिक सबै विनिर्माण लागत गर्न उपकरण खरीद लागि उद्यमी लागत लिए। यो राजधानी को आदर्श दक्षता गणना गर्न साथै लाभ गणना गर्न आवश्यक छ। यस मामला मा लगानीको संरचना एक धेरै मान छ। यो उद्यमी आफ्नो राजधानी देखि एक लामो समय को लागि स्वार्थपूर्ति गर्न आशा भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
ब्याज दर र लगानीको यसको प्रभाव
लाभ र ज्याला को कीन्स अनुपात पूर्व पक्षमा निर्णय गर्छ। चासो को दर निवेश देखि अपेक्षित छ कि लाभ भन्दा कम छ भने निर्माता productively तरल कोष लागू गर्न सक्नुहुन्छ। बैज्ञानिक लिक्विडिटी संग जानेबेलामा लागि उत्पादन बोर्ड रूपमा ब्याज को दर निर्धारण गर्छ। आफ्नो राय, यो वर्तमान र भविष्य आर्थिक अवस्था को आत्मपुरक मूल्यांकन मा निर्भर गर्दछ। यस मामला मा, लगानीको थप पहुँचयोग्य, तरल रूप मा राजधानी वृद्धि को आपूर्ति रूपमा हुनेछ।
एकै समयमा, यस पैसा को मुद्दा मूल्यहरु वृद्धि र आफ्नो रूप, लिक्विडिटी मा वृद्धि कम गर्नेछ क्रय शक्ति कम हुनेछ। पैसा को लागि मांग चासो को एक पर्याप्त कम दरमा असीमित हुन सक्छ। कीन्स निवेश को संरचना हो जो सामान्य मा उद्यमीहरू लगानीको योजना परिवर्तन सक्षम चासो को दर, को प्रभाव अन्तर्गत फरक हुन सक्छ भनेर अस्वीकार गरियो।
को Keynesian स्कूल निवेश, लगानी गुणक अन्वेषण छ, र पनि व्यावहारिक सिफारिसहरू सिर्जना गर्दछ। यो आधारमा, यो ठूलो लोक, आदि को संगठनको लागि बजेट देखि धन पाएको सामाजिक कार्यक्रम, उपाय सिर्जना गरिएको थियो लगानी गुणक अर्थव्यवस्था मा एक संकट, साथै सामान्य मा आर्थिक अवस्था सकारात्मक प्रभाव भएको हुँदा प्रभावकारी माग कायम गर्न अनुमति दिन्छ।
Bollinger बैंड (Bollinger बैंड)। वर्णन, कन्फिगरेसन र Bollinger बैंड को प्रयोग
साझा कसरी किन्ने "बचत"? यो सम्भव छ?
लगानी सिक्का - घरेलू र विदेशी
कम्पनी LR। समीक्षा
आत्म मर्मत पीवीसी डुङ्गा
फिनल्याण्ड को जलवायु को पर्यटकहरु यो देश भ्रमण गर्न इच्छुक हुनेछ जहाँ
केमेरोभो बस स्टेशन - एक प्रमुख परिवहन नोड साइबेरिया
संसारको सबैभन्दा महंगा पोशाक के हो? फैशन whims अध्ययन
रेस्टुरेन्ट "बाकु Boulevard" गर्न "Kolomna" - सारा परिवारको लागि एउटा सिद्ध स्थान